Ny famaritana vola lehibe mandritra ny krizy corona dia mitarika amin'ny hyperinflation: ny bitcoin ve no vahaolana? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 13 May 2020	• 21 Comments
"Vola voaroy" na "vola tsy azo antoka" dia ny vola izay mahazo ny sandany fa tsy avy amin'ny fitaovana namboarina (toa vola volamena sy volafotsy), fa avy amin'ny fahatokisana fa afaka mividy entana sy serivisy izy io. Tsy miorina amin'ny lanjany sy ny votoaty metaly sarobidy ny vidiny, fa amin'ny fahatokisan'ny mpandraharaha ara-toekarena ny sandan'ny vola.
Ny fanananao vola volafotsy na volafotsy taloha ela izay dia nisy ifandraisany amin'ny vidiny haingana sy firy volamena na volafotsy. Miaraka amin'ny fampidirana vola vola, azo avadika ny trano fanaovana pirinty. Miaraka amin'ny isa 'vola amin'ny solosaina', ny fenitra OPEC dolara ary ny fampifandraisana ny famokarana solika dia tsy maintsy manome satra. Ireo fitsipika rehetra ireo dia natsipy anaty ranomasina nandritra ny krizy corona.
Ny banky foibe dia manonta vola tsy voafetra. Manao izany ry zareo satria dia mitombo ny fangatahana vola. Amin'ny fomba ahoana, amin'ny alàlan'ny governemanta, dia afaka manolotra ireo fonosana fanampiana rehetra izay ametrahanao vola ny vola mba hivelomana?
Nahoana no tena zava-dehibe ny fandrakofana vola?
Fony mbola nanana volafotsy volafotsy sy volamena ianao, nitombo ny tinady an'io vola io rehefa nitombo ny isan'ny mponina ary nitombo ny varotra. Midika izany fa mila manana vola madinika kokoa ianao amin'ny fanaovana barter. Nividy ny vokatrao aho ary ho valiny dia omena vola volamena maromaro miaraka aminao. Azonao atao ny mividy izay ilainao amin'ireo vola madinika volamena ireo.
Satria efa fantatrao tamin'izany fotoana izany fa fizotran'ny asa ny fakana vola volafotsy na volamena avy amin'ny tany, fantatrao koa fa betsaka ny vola fanampiny homena, fa ny filàna vola bebe kokoa dia tsy midika akory izany fa hiseho tampoka io vola io ao anatin'ny herinandro. nihena ny vidiny. Rehefa dinihina tokoa, dia mila fotoana sy ezaka io mba hanesorana an'io fitaovana io avy ao anaty tany ary hanary azy ho vola madinika. Noho izany dia afaka nihazona ny volanao nandritra ny fotoana kelikely ianao mba hividy zavatra amin'ny herinandro ho avy, tsy matahotra na dia mitentina antsasak'izay mitentina ny vola madinika.
Rehefa nosoloana vola taratasy ireo vola mavesatra ireo dia nanjary mora kokoa izany. Mora ny manao pirinty ny taratasy. Noho izany, ny banky foibe dia tsy maintsy nitodika tamin'ny mpanao gazety. Mbola nitaky fotoana sy ezaka izany, saingy tsotra kokoa izany. Ity taratasy ity dia nifamatotra tamin'ny fitrandrahana volamena. Lasa fenitra volamena izany. Ohatra, ny fanontana vola dia mifandray hatrany amin'ny hafainganam-pandeha izay ahafahan'ny mpitrandraka volamena no lasa volamena, ka nosakananao ny fihenan'ny vidiny haingana.
Satria nitombo ny filàna vola raha nitombo ny isan'ny mponina sy ny varotra, dia nilaozan'ny fotoana iray io fenitra volamena io. Izany no fomba nananganana ny OPEC. Ity oriasan'ny solika ity dia tsy maintsy nampifandray ny famokarana vola amin'ny famokarana solika. Koa ny fifanarahana eran'izao tontolo izao dia natao momba ny habetsaky ny barika azon'ny firenena vokarina. Ny dolara dia nifamatotra tamin'ny famokarana solika, ka raha te hanonta dolara ianao, dia afaka manao izany arakaraka ny habetsahan'ny solika voatavo.
Ny fitsipiky ny solika io dia efa hatramin'ny ela dia navotsotra ary ankehitriny dia tsy misy fandrakofana intsony. Amin'izao fotoana izao, ny banky foibe no mamorona 'vola mavesatra'. Midika izany fa tsy misy fetrany ny manonta vola ary satria tsy misy antoka dia mifandray amin'ny hafainganam-pandehan'ny volamena na menaka io, tsy azo ihodivirana ny famerenam-bola. Afaka mahatsapa ny fihenan-karena lehibe ianao ao anatin'ny 1 herinandro.
Inona no dikan'ny vola tsy azo antoka amin'ny fampiharana?
Amin'ny fampiharana, izany dia midika fa miharatsy haingana ny vola. Vola an-tapitrisany maro sy Euros no vita pirinty nandritra ny krizy corona. Midika izany fa kely sisa ny vola dolara sy euros. Na ho ela na ho haingana dia hisy fiantraikany amin'ny vidiny any amin'ireo fivarotana izany.
Ankehitriny, ireo banky afovoany dia nitaingina tropy hametahana ny fihenan'ny vola. Ohatra, raha toa ianao ka orinasa multinational iray misambotra vola amin'ny banky lehibe, dia ny banky lehibe dia nindraminy vola avy amin'ny banky foibe. Ireo banky foibe avy eo dia manonta vola betsaka kokoa (marina, tsy manao pirinty azy ireo izany, mampitombo ny isa ao amin'ireo rafitry ny solosaina izy ireo) mba hividianana ireo antoka miantoka ny trosa (fatorana, porofon'ny trosa) amin'ireo multinationals ireo.
Aoka hatao hoe manana trosa 100 tapitrisa ny orinasa iray. Raha mividy trosa an-trosa amin'ity orinasa ity ny ECB, dia nahazo 100 tapitrisa maimaimpoana maimaim-poana io orinasa io. Io orinasa io dia afaka mividy ny anjarany avy amin'ny vola na mividy ireo mpifaninana nianjera.
Amin'izany fomba izany dia miantoka ianao fa mihevitra ny vahoaka fa mbola mitoetra tsara ny toekarena. Raha ny fampiharana anefa, avy hatrany dia nahatonga ny fihenan'ny vola 100 tapitrisa ianao. Ankehitriny tapitrisa zato amin'ny arivo tapitrisa miliara dia ampahany kely fotsiny, ka raha ataonao ho avo be ny tendrombohitra trosa, dia mihena ny fihenan-danja amin'ny vidim-piainana. Araka izany dia toa mino ny banky afovoany fa ny avo kokoa no anaovan'izy ireo ny tendrombohitra, ny kely kokoa ny fihenan-danja amin'ny isan-jato.
Izany no hitantsika aty Etazonia ankehitriny, ary izay koa no hitantsika ao Eropa. Mitombo be ny tendrombohitra trosa. Na izany aza, ny manam-pahaizana rehetra amin'ny lafiny ara-bola dia manaiky fa ny fihenan-karena goavambe dia manintona.
Ampitahao amin'izany vola volamena izany. Io vola madinika vola azonao tamin'ny herinandro lasa iny raha nivarotra am-bary ovy ianao dia efa ho lafo sahady amin'ity herinandro ity, satria ny volamena dia tsy ho voadotra haingana. Na izany aza, ny euro ao amin'ny kaontinao amin'ny banky dia mihena haingana ny sandany satria be ny vola natao pirinty haingana be dia be ny vidin'ny plummets.
Bitcoin ho fenitra volamena vaovao
Ny mpamorona bitcoin tsy fantatra anarana dia tonga amin'ny vahaolana tena maranitra izay mampatsiahy ny fitrandrahana volamena.
Tokony tsy hisalasala momba ny vola madinika vola toy izany isika, satria manome fahafaham-po ny zava-misy rehetra. Ary koa ny zava-misy fa Microsoft amin'ny 2019 patent 2020-060606 Famoahana azy dia manondro fa ny cryptocurrency dia afaka mifandray amin'ny 'Internet amin'ny zavatra'; izay ahafahantsika ho tonga iray amin'ireny 'zavatra' ireny.
Na eo aza izany dia efa ao anatin'ny vanim-potoana ara-bola traceable isika. Rehefa dinihina tokoa, dia vola azonao aleha amin'ny alàlan'ny app-nao na karapan'ny banky. Miaraka amin'ny famongorana ny vola taratasy efa ho avy, izao isika dia ao amin'ny tranonkala nomerika azo trandrahana. Ny olana fanampiny amin'ilay vola, amin'izao fotoana izao dia ny manimba haingana be ihany koa.
Satoshi Nakamoto no solon'anaran'ny olona na vondrona tsy fantatra izay namolavola ny cryptocurrency Bitcoin ary nanangana ny angona blockchain voalohany. Mety hanontany tena isika raha ny fikatsoan'ny rafitra ara-bola ankehitriny dia tsy nomanina fotsiny hitarika antsika mankany bitcoin ho fenitra vaovao. Amin'izany dia mety hanontany tena ianao raha tsy avy amin'ny vondrona hery elite mitovy ihany ny Satoshi Nakamoto.
Saingy, ny rafi-pitantanana bitcoin dia tena torontoronina tsara ary mifototra amin'ny fitsipiky ny fitrandrahana volamena. Mba hamaritana vola bitcoin lava dia tsy maintsy hitrandraka ny bitcoins. Tsy mety izany amin'ny spatula sy pala amin'ny tany, toy ny volamena, saingy miaraka amin'ireo solosaina haingana izay manana vidiny mora vidy sy mandany solika (herinaratra). Izany dia miantoka fa tsy ny rehetra afaka mamokatra bitcoins fotsiny.
Ny fizotran'ny famokarana bitcoins dia antsoina hoe 'fitrandrahana', izay mampatsiahy ny fitrandrahana volamena amin'ny toeram-pitrandrahana iray. Ity dingana fitrandrahana ity dia midika fa ny solosaina dia mila mamaha ny pôlitika matematika izay be pitsiny ka ahafahana misitraka andro hahitana ny vahaolana. Na izany aza, mitombo ny fahasarotan'ny tolo-kevitra satria maro ny solosaina ao anaty tamba-jotra. Arakaraka ny hanombohan'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany no vao maika manisa ny vahaolana.
Isaky ny mamaha ny fomba fiasa ny solosaina toy izany, 1 bitcoin no noforonina. Ho fisaorana anao amin'ity kajy ity, ny mpitrandraka dia mahazo ampahany amin'izany bitcoin izany ho valim-pitia.
Mba hanamafisana bebe kokoa ny lalao dia tapaka amin'ny antsasaky ny efatra taona ny valisoa. Loza tampoka io tranga io tamin'ity herinandro ity. Amin'ny 12 may ho mazava. Ka raha nahavita niatrika ny ahy 12 bitcoin talohan'ny 1 May ianao dia nahazo x% ho an'io. Aorian'ny 12 Mey, tapaka izany amin'ny vola. Midika izany fa ny mpitrandraka sasany dia tsy mahazo mividy "spatula" sy "pala" vaovao hanaovana ny asa fitrandrahana azy. Tsy afaka mandoa ny volan'ny herinaratra intsony izy ireo na tsy afaka mividy solosaina haingam-pandeha intsony. Nianjera izy ireo.
Raha maheno an'io fomba io ianao dia mety mieritreritra avy hatrany: Izany dia mitondra monopolization. Midika izany fa ny orinasa mpanankarena dia ho lasa mpitrandraka lehibe indrindra ary noho izany dia hanana teboka afovoany ianao izay misy ny fitrandrahana rehetra. Ny tantara anefa dia na izany aza, noho ny fahaverezan'ny solosaina marobe tao amin'ilay tambajotra, mihena ihany koa ny filanjana kajy. Izany dia mandrisika ireo mpitrandraka vaovao haka ny spatulas ary manomboka ny angady.
Raha mamadika ianao na mitodika dia hahita fitomboana ihany koa eto ary mety hisy ny risika.
Na izany aza, mihamaro ny mpampiasa vola liana amin'ny fitsipiky ny fiasan'ny bitcoin, noho ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ity. Rehefa dinihina tokoa, mampahatsiahy ny fahasarotanao izay itondranao ny volamena amin'ny tany ka noho izany dia ampitahaina amin'ireo vola madinika volamena taloha sy ny fahatokisana ny 'ny marika eo amin'ny famarotana'. Izany no antony ahitanao fa misy an'arivony tapitrisa ankehitriny amin'ny fifanakalozana ara-barotra bitcoin.
Noho izany ny Bitcoin dia afaka manangana fenitra volamena vaovao. Izy io dia afaka manome izany fahatapahana amin'ny fihenan'ny vola very izany amin'ny tsy fahita ankehitriny.
Mampifandray ny vola amin'ny bitcoin
Miantso ny demokrasia mivantana I nivoaka omaly, Niresaka momba ny fampifandraisana ny vola amin'ny bitcoin ho "fenitra volamena" aho. Azonao atao ny milaza fa ny vola dia tsy maintsy mifandray amin'ny zavatra iray. Afaka miverina amin'ny volamena ara-batana tena toy ny fenitra ihany ianao, saingy avy eo tsy maintsy manohy mihady volamena hiala amin'ny tany ianao ary tsy milamina velively. Ny solosaina noana dia tsy tsara loatra ho an'ny tontolo iainana, fa hitantsika fa mivoatra ny teknolojia, izay mety hiteraka herinaratra kokoa amin'ny tontolo iainana ary afaka milaza ianao fa ny filoham-pirenena dia tokony ho "fenitra volamena".
Mazava fa tsy maintsy hisy karazana "fenitra volamena" indray. Raha tsy izany dia tsy maintsy miatrika fanalefahana vola be isika. Izany indrindra no mitranga mandritra ny krizy corona. Ny fanavaozana ny fenitra volamena vaovao no tokony hiarahana amin'ny piramida. Aiza izao mihazakazaka ny tsipika izao ary mihabe hatrany ny hery mandeha amina vondrona kely manankarena, dia tokony ho tonga eo ampelatanan'ny vahoaka ny hery.
Mazava ho azy ny hetsika famerenana hery amin'ny vahoaka. Mbola tsy nitranga tamin'ny tantara mihitsy izany. Na izany aza ny teknolojia mitovy amin'izany, izay miorina amin'ny bitcoin, izany hoe blockchain, dia manome fotoana hanomezana ny vahoaka fahefana amin'ny fanapaha-kevitra. Tsy mila manara-maso tanteraka ny firafitry ny fiarahamonina rehetra ianao fa mila manova ny fitantanana.
Ohatra, azonao atao ny manana minisitera notarihin'ny minisitra izay notendren'ny vahoaka ary nanao tatitra tamin'ny vahoaka. Raha tokony hiankina amin'ny satroboninahitra kosa izy ireo, dia mianiana amin'ny vahoaka izy ireo ankehitriny. Izany koa dia tokony hihatra amin'ny fanompoana sivily ary ny asa rehetra izay manao fianianana amin'ny seza tsy fantatra (mpitsara, mpisolovava, polisy, inspektera, mpanatanteraka, sns).
Mazava ho azy fa tsy afaka mitantara ny zava-drehetra ianao ary manolotra izany amin'ny vahoaka, noho izany dia ilaina ny dingana fanovana. Ny fanontaniana dia raha ny olona no afaka manosika hanao revolisiona tahaka izany sa hiandry ny fiandrasan'ny iray amin'ireo miliara an'arivony toa an'i Elon Musk sy i Bill Gates, izay mety hitranga fa ny fifandraisana miaraka amin'ny blockchain dia hiaraka aminy. mampifandray ny atidohantsika izany rafitra na mampifandray izany rafitra izany amin'ny fanamarinana momba ny vaksiny.
Raha misy fotoana hanombohana ny fanovana dia efa izao izy io. Tsy tokony hohadinointsika izany fotoana izany. Na izany aza, mila mitady mandroso isika.
Raha te hiova isika dia afaka manao zavatra roa. Na hiandry mandra-pahafatin'ny olana ara-bola fiakarana isika, ary miha mafy ny fiakaran'ny vidim-piainana ka ny tanjaky ny hery mitovy no manome antsika ny "standard volamena" ho vahaolana. Na mandray andraikitra isika.
Miandry ny haavon'ny fisondrotam-piainana ve isika ary ho antsika ao anatin'ny tranonkala fanaraha-maso tanteraka amin'ny piramidin'ny herinaratra ary tsy misy fiverenana? Avy eo isika dia manana antoka iray momba ny fitantanana ara-teknolojia. Izany hoe hampifamatotra antsika amin'ny fomba rehetra isika amin'ny rafitra iray izay mampiasa teknolojia mba hahatonga antsika ho andevo nomerika.
Raha misafidy ny haka ny tenantsika isika dia afaka mametraka ireo brakes ary mbola hahazo tombony amin'ny lafiny mahasoa amin'ity fampandrosoana ara-teknolojika ity. Avy eo dia afaka mametraka ny brakes amin'ny fampandrosoana malalaka AI ary afaka mametraka ny brakes amin'ny ivontoerana ho an'ny hery.
Ny fanontaniana dia noho izany, na tsia ny fotoana anananao dia ampy hanosika anao. Ny fanontaniana dia hoe ny fahafaha-manana fahazavana dia ampy hanosika ireo mpiray tanindrazana an-jatony maro.
Izay no misy ny filozofian'olombelona amin'ny filalaovana, ary eo no tonga ny fanamby ho an'ny fiovana tena ao an-tsain'ny maro. Na izany na tsy izany dia te-hijery ny tenako eo amin'ny fitaratra aho ary mahalala fa nanao izay tsara indrindra vitako aho. Eo ny fotoana, eo ihany ny mety. Isika fotsiny fotsiny no maka sy manao izany. Tsy mitaky fantsom-bato sy baolina. Mila revolisiona ao an-tsainao fotsiny.
Miaraka amin'ny rafitra fifidianana mivantana an-tserasera, afaka mametraka mpitarika vaovao izay mitatitra amin'ny vahoaka isika, manao lalàna mazava kokoa ary tsotra kokoa, manafoana ny rafitra fiatrehana ary mampifandray vola vaovao amin'ny bitcoin. Azontsika atao ny manilika azy io ho tsy mety na afaka miditra isika ary hivoatra ny fangatahana. Ao anaty izany ve ianao?
Fanafihana mahery vaika tao amin'ny tranokala Martin Vrijland, fa hitohy isika!
Tags: bitcoin, krizy corona, dolara, Euro, Featured, Fiat, geld, vola rafitra, fenitra volamena, halving, halving, ny vidim-piainana, menaka, fihenan-danjan'ny, OPEC, mamerina, revolisiona, Satoshi Nakamoto, taratasy fanamarinana vaksiny
13 May 2020 amin'ny 11: 31
Jereo eto hoe nahoana ny fitsipiky ny fitrandrahana bitcoin no hita fa mivaingana.
Benzo Wakker nanoratra hoe:
13 May 2020 amin'ny 12: 14
Voasonia fanangonan-tsonia, ratsy loatra raha vitsy ny olona nanao an'io.
13 May 2020 amin'ny 13: 46
Toa ny fanaon'ny olona te hitaraina sy te handre izay diso, saingy tsy te hanao ezaka hanombohana ny fanovana izy ireo. Ny fandehanana any amin'ny biraom-pifidianana isaky ny efa-taona dia mahaliana tokoa, avelao ny hanetsika ny tenanao mba tena hanao na inona na inona - na dia amin'ity tranga ity aza, tsy mihoatra ny fanao ny fanangonan-tsonia mahazo hetsika.
Noho izany dia tsy mino ny fiovana ny olona ary toa aleony mamela izany. Ny ankamaroan'ny olona izay milaza fa mifoha izy ireo dia tsy manao na inona na inona amin'ny fampiharana.
Avy amin'ny 'miaraka amina kitapo eraky ny tanana' mankany DWDD, ny 'miaraka amina kitapo marika' hita an'i Jensen no hany fiovana hita 😉
13 May 2020 amin'ny 14: 17
Eny, saro-pady angamba na misy zava-misy marina amiko. Tsy manantena zavatra avy amin'ny andevo aho. Azo antoka fa tsy te-hanova vola fotsiny izy ireo. Ny mpanompo dia tsara amin'ny andevo. Nilamina ihany izany rehefa tsy nidina an-dalambe ireo andevo noho ny tahotra ny 'corona'. Malahelo ny fitsaharana rehetra aho ankehitriny, fa tsy miraharaha ny fitondran-tena sy izay tsara. Madurodam dia tsy firenena fanovana sy fikomiana. Izay no toetran'ny andevo sy ny toe-tsaina mpivarotra eto.
Tena tsara ny andevo, farafaharatsiny ny tombony amin'ny maha andevo mihoatra ny tsy fatiantoka. Ary aza adino ny fitiavan-tena sy ny fitsiririan'ny andevo.
Martin, mahery fo ianao, miezaka ny tsara indrindra hisintonana soavaly maty ianao ..
13 May 2020 amin'ny 15: 30
Ny zavatra niainako dia misy fanatanjahan-tena bebe kokoa ao anaty harona ovy.
13 May 2020 amin'ny 15: 40
Ny ovy dia misy toetra mampiavaka azy izay mitsimoka voajanahary. Raha apetrakao amin'ny tany ilay kitapo ovy, dia manana sariety feno feno ovy ianao herinandro vitsy taty aoriana. Heveriko fa tokony ho tsara toetra kokoa ianao momba ny harona ovy. Soavaly maty dia tantara hafa 😉
13 May 2020 amin'ny 15: 54
ny tena hevitro, ny voninahitra tsy misy tsy marina ...
13 May 2020 amin'ny 16: 12
Ny soavaly maty dia tantara iray hafa. Miala tsiny raha hitako fa tsy dia matotra loatra.
13 May 2020 amin'ny 17: 18
Azo takarina tsara. Misaotra anao amin'ny alàlan'ny fankasitrahanao.
Tsy maintsy miaiky aho fa diso fanantenana loatra aho amin'ny fahitana fa tsy misy fihetsehana eo amin'ny zanak'olombelona, ​​saingy na izany aza dia hanohy amin'ny fanantenana aho fa hisy foto-kevitra io.
Gaga aho indrindra fa tsy misalasala ny olona hameno ny fangatahana ary manindry bokotra iray. 30 segondra monja no tena asa. Moa ve ny tsy finoana na matahotra loatra? Na ireo mpanara-dia an'arivony rehetra isan'andro? Sa tena fialamboly kely sy fialam-boly ihany?
13 May 2020 amin'ny 17: 28
Vitsy ny mahatakatra ny fiantraikan'ny toe-draharaha ankehitriny. Ny mahita fifandraisana sy ny vokatr'ireo fihetsika sasany dia mbola mitaky EQ / IQ manokana ary tsy miresaka momba ireo andevo tsy misy dikany fotsiny aho amin'ny 'lohateny' talohan'ny anarana.
Ny fahitana ny helikoptera, noho izany dia takiana, ny fanesorana ireo blinkers dia tsy mora. Ka tsy miresaka jamba ara-batana aho 😉
13 May 2020 amin'ny 17: 56
Heveriko fa maro no tsy te hampahafantatra ny antsipirihany ny anarany sy ny adiresiny. Matahotra ny mpampiasa azy, 'karera', serivisy fiarovana AIVD sns sns. Mikohaka. Maherika amin'ny kiraro. Na izany aza, tsy tokony hisy atahorana ho an'ny andevo. Sary an-tsaina.
13 May 2020 amin'ny 18: 00
Indray mandeha aho dia nanana "namana" (olom-pantatra) izay tsy an'asa ao an-trano nandritra ny taona maro. Izy io manam-pahaizana manokana. Fahavoazana amin'ny lafiny: mampifandray sy manivana ny angon-drakitra amin'ny angona.
Tamin'io fotoana io dia afaka niverina niasa izy taorian'ny fianarana mamelombelona.
Famaritana sary: ​​vehivavy sy tsy manan-janaka mivarotra trano.
Rehefa nanontaniako izy raha tsara kokoa - miaraka amin'ny fahalalany rehetra ny amin'ny fitsikilasan'ny governemanta ny vahoaka - hametra-pialana amin'ny firenentsika fa tsy maka asa izay manampy amin'ny fananganana ny big brother (big data analyses) rafitra, dia izao no valiny: “Tsara raha azoko atao ny miova ao anatiny. Ary saika saika maty ny tranoko. Izao dia afaka mipetraka eto fotsiny aho ary manohy ny fitaterako fiara ».
Io fiovana avy ao anaty io dia mbola tsy hita 😉
Aiza ny mahery fo? Ao an-tranon'izy ireo izy ireo ary afaka manohy ny fiara.
13 May 2020 amin'ny 18: 23
Ity ve tsy ohatra tsara faran'izay olona tsy ampy saina ary tsy tsapany fa manamboatra ny bara hidin'ny fonja izay izy manidy ny tenany amin'ny isa?
13 May 2020 amin'ny 15: 41
Izay any Alemaina sy France dia mbola velona ihany ny Kampfgeist, fa ny Madurodam kosa dia ara-bakiteny sy ara-bakiteny. Miaraka amin'ny teny hoe Resistance ny olona dia mieritreritra fanitsiana ..
13 May 2020 amin'ny 15: 44
Ataovy hitafy ny saron-tava raha handeha any ivelany ianao
13 May 2020 amin'ny 15: 42
Hipoaka ny baomba, ary hanaraka ny fahamaotinana
mec nanoratra hoe:
13 May 2020 amin'ny 17: 48
Io sisa tavela eto an-tany izay manana fahefana aminay dia manana olana lehibe raha manary ny findainao ianao na mijanona tsy mampiasa an'io zavatra io, very ny fifehezan'ny NWO aminao. Raha tsy misy ny spyphone paosinao shit-ass dia tsy ho afaka hanara-maso anao intsony izy 24/7 ary atahorana hampandeha ny tsirairay ny volan'izy ireo.
Ka ajanony ny fitondran-tena junkie ao amin'ny findainao
14 May 2020 amin'ny 08: 00
Amiko dia tsy misy telefaon-telefaina any ivelany
13 May 2020 amin'ny 18: 10
Ny ampahany amin'ny fanohanan'ny corona dia mandrahona ny hamerenana azy: 'Fahadisoana lehibe'
Heveriko fa tsy fahadisoana lehibe izany, fa mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny bilderberg handrava ny saranga antonony afovoany ary hatolony amin'ny governemanta izany, ka maro kokoa ireo mitarbeiter.
Ao amin'ny 33:10 Rutte: “Mino aho fa manana fanjakana matanjaka. Mila fanjakana matanjaka ity firenena ity. ” 34:23 "Firenena izay tena ara-tsosialy tokoa isika."
Ny tena niahiahy Stiglitz dia esorina ao amin'ny tranobe mba hanazavana zavatra vitsivitsy, ka izany no afovoany. Ny sôsialisma no vavahady hidirana (teknolojia) komunisme efa nampitandremana ianao!
13 May 2020 amin'ny 23: 57
ny fomba hanombohana hetsika https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
14 May 2020 amin'ny 11: 56
Handeha haingana izany. Ny prototype ilay Mac vaovao. Ao anatin'izany ny zavatra tsy maintsy ataonao, izay tokony hotsidihanao hibaikoana (vakio ny tsirairay dia eo am-pelatanany ny mari-pamantarana baiko, fahadisoana), raiso ny fihomehezana sy ny toerana misy anao, ary ny fihetsikao. Eo ambanin'ilay marika tokana maso sy jerena rehetra. Inona ihany koa maso iray, maso mamaky AI. Mazava ho azy fa nihanilana toy ny jamba.
« Fotoana hanaovana ny fiovana lehibe sy famerenana lehibe: sonia ny fitakiana
Tokony alainao ve na mandà ny vaksiny Covid-19 raha toa ka voatery mandoa? Ny hatao? »
Total fitsidihana: 2.419.594